NUGရဲ့ကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးရညျမှနျ၊ ထမငျးကွျောနတေဲ့ပုံလေးတငျပွီး၊ သူ့ရဲ့ဌာနအောကျက PDF တှနေဲ့ လကျရညျတပွငျတညျးဖွဈကွောငျး ညှနျးဆို – Shwe Yaung Media
NUGရဲ့ကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးရညျမှနျ၊ ထမငျးကွျောနတေဲ့ပုံလေးတငျပွီး၊ သူ့ရဲ့ဌာနအောကျက PDF တှနေဲ့ လကျရညျတပွငျတညျးဆိုတာကို ညှနျးဆိုလိုလို့ ပုံတငျလိုကျတာဖွဈတယျ၊
ရနျသူဘကျက PDF တှနေဲ့ပွညျသူကွားကို ဝါဒဖွနျ့နတောက NUG ဝနျကွီးတှဟော ထိုငျးမှာ၊စင်ျကါပူမှာ ရတဲ့ရံပုံငှတှေနေဲ့ တိုကျခနျးတှဝေယျ၊ ကှနျပြူတာတလုံးနဲ့ အဲကှနျးခနျးထဲကနေ ဇိမျနဲ့နပွေီး ပွညျတှငျးကလူငယျတှကေို သခေိုငျးနတော အစရှိသဖွငျ့ ဝါဒဖွနျ့နတောကို တနျပွနျလိုလို့ တငျလိုကျခွငျးဖွဈတယျ။
ဒီအခြိနျ ဒီကာလဟာ လျောဘီလုပျရမယျ့အခြိနျကာလမဟုတျဘူး၊နားလညျပါတယျ၊ဒါပမေယျ့ တဈဘကျက ဝါဒဖွနျ့သှေးခှဲမှုနဲ့ စိတျဓါတျစဈဆငျရေးအပျေါ ကနြျောတို့ အရှိအတိုငျးခပြွ တနျပွနျရမယျ့တာဝနျရှိတယျ၊
ဘာကွောငျ့လဲဆို နိုငျငံတဝနျးမှာ NUG ရဲ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ လမျးညှနျမှုအောကျကနေ ရပျတညျတိုကျပှဲဝငျသှားမယျလို့ ကွညောခကျြထုတျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ PDF အဖှဲ့ပေါငျးမြားစှါရှိနပေါတယျ၊ ယငျးအဖှဲ့ပေါငျးမြားစှာကို NUG ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနကနေ အပွညျ့အဝမကူညီနိုငျသေးပါဘူး။
ရရာ လကျနကျစှဲကိုငျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ PDF တှကွေား ငါတို့ရဲ့အကွီးအကဲဟာ ငါတို့နဲ့တသားတညျးရှိနတေယျဆိုတာကို သိကွဖို့လိုတယျ၊ ဒါကွောငျ့လဲ ရနျသူဘကျက ဝါဒဖွနျ့သလိုမဟုတျကွောငျး ကနြျောတို့ ခပြွရတာဖွဈပါတယျ၊ အမှနျဆို ဒီကိစ်စဟာ လုံခွုံရေးစညျးတောငျ ကြိုးပကျြရပါသေးတယျ။
ဒါဟာ လျောနတောမဟုတျဘူး၊ လျောနရေမယျ့အခြိနျလဲမဟုတျဘူး၊ NUG ကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးရညျမှနျက ဘာတှလေုပျလိုကျတယျလို့ မွငျခငျြရအောငျ ဦးရညျမှနျကို စဈအာဏာရှငျတပျက မအလလို့မွငျနတောလား၊ လကျရှိကာလမှာ NUG မှာ ဌာနအလိုကျ သူ့နရော သူ့တာဝနျကိုပေးအပျထားပမေယျ့၊ ဘယျကိစ်စကိုမဆို အားလုံးတိုငျပငျကွ ဆှေးနှေးကွ၊ ဆုံးဖွတျကွ လုပျဆောငျကွရတာပါ။
Credit – WG. ဝကွေီး
NUGရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်၊ ထမင်းကြော်နေတဲ့ပုံလေးတင်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ဌာနအောက်က PDF တွေနဲ့ လက်ရည်တပြင်တည်းဆိုတာကို ညွှန်းဆိုလိုလို့ ပုံတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်၊
ရန်သူဘက်က PDF တွေနဲ့ပြည်သူကြားကို ဝါဒဖြန့်နေတာက NUG ဝန်ကြီးတွေဟာ ထိုင်းမှာ၊စင်္ကါပူမှာ ရတဲ့ရံပုံငွေတွေနဲ့ တိုက်ခန်းတွေဝယ်၊ ကွန်ပျူတာတလုံးနဲ့ အဲကွန်းခန်းထဲကနေ ဇိမ်နဲ့နေပြီး ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေကို သေခိုင်းနေတာ အစရှိသဖြင့် ဝါဒဖြန့်နေတာကို တန်ပြန်လိုလို့ တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီအချိန် ဒီကာလဟာ လော်ဘီလုပ်ရမယ့်အချိန်ကာလမဟုတ်ဘူး၊နားလည်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်က ဝါဒဖြန့်သွေးခွဲမှုနဲ့ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးအပေါ် ကျနော်တို့ အရှိအတိုင်းချပြ တန်ပြန်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်၊
ဘာကြောင့်လဲဆို နိုင်ငံတဝန်းမှာ NUG ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်ကနေ ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့ပေါင်းများစွါရှိနေပါတယ်၊ ယင်းအဖွဲ့ပေါင်းများစွာကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အပြည့်အဝမကူညီနိုင်သေးပါဘူး။
ရရာ လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကြား ငါတို့ရဲ့အကြီးအကဲဟာ ငါတို့နဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိကြဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ ရန်သူဘက်က ဝါဒဖြန့်သလိုမဟုတ်ကြောင်း ကျနော်တို့ ချပြရတာဖြစ်ပါတယ်၊ အမှန်ဆို ဒီကိစ္စဟာ လုံခြုံရေးစည်းတောင် ကျိုးပျက်ရပါသေးတယ်။
ဒါဟာ လော်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ လော်နေရမယ့်အချိန်လဲမဟုတ်ဘူး၊ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က ဘာတွေလုပ်လိုက်တယ်လို့ မြင်ချင်ရအောင် ဦးရည်မွန်ကို စစ်အာဏာရှင်တပ်က မအလလို့မြင်နေတာလား၊ လက်ရှိကာလမှာ NUG မှာ ဌာနအလိုက် သူ့နေရာ သူ့တာဝန်ကိုပေးအပ်ထားပေမယ့်၊ ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အားလုံးတိုင်ပင်ကြ ဆွေးနွေးကြ၊ ဆုံးဖြတ်ကြ လုပ်ဆောင်ကြရတာပါ။
အမြင်အမျိုးမျိုးကြားမှာ ကျနော်တို့ အကောင်းဘက်ကိုပဲ မြင်ပေးကြရအောင်ပါ၊ ကျနော်တို့ ညီညွတ်ကြရမယ်လေ၊ ဒါမှသာ ကျနော်တို့နိုင်မှာ
Credit – WG. ဝေကြီး